Lasa Misy Dikany ny Fiainako | Diary 2015
TANTARANY Nifindra teto an-drenivohitra izy tamin’ny mbola kely fa mba te hanatsara fiainana. Nahita ny fahamarinana izy, ary nanao loha laharana an’ilay Fanjakana foana hatramin’izay.
NIFINDRA teto Saint-Domingue i José tamin’izy 11 taona. Nivarotra gilasy sy voasary no asany, na koa nanadio kiraro. Nalaza ho mazoto miasa sy tsy manao alasafay izy, tamin’izy tovolahy. Nasain’ny zokiny niandry ny tranony izy, taona maro tatỳ aoriana. Vavolombelon’i Jehovah io zokiny io. Hitan’i José teo ambony latabatra ilay boky hoe Azonao Atao ny Hiaina Mandrakizay ao Amin’ny Paradisa eto An-tany, ary novakiny nandritra ny alina tontolo. Teo vao fantany hoe inona no tokony hatao raha tiany hisy dikany ny fiainany.
Nankany amin’izay Efitrano Fanjakana akaiky azy indrindra i José, ny faran’ny herinandro, ary nolazainy tamin’ireo rahalahy tao fa Vavolombelon’i Jehovah izy. Fantany, hono, hoe mila mivory izy ary mila mitory ny vaovao tsara. Efa hitany tao amin’ny boky Hiaina Mandrakizay koa, hono, hoe inona avy ny zavatra tsy tokony hataon’ny Kristianina, ary nomeny toky ireo rahalahy fa tsy manao an’ireny izy. Nekena ho mpitory i José, tapa-bolana taorian’izay. Natao batisa izy rehefa afaka enim-bolana, tamin’izy 21 taona.
Nialany ny asany, fa nanelingelina ny fivoriany. Asa hafa indray no nataony, na dia ampahefatry ny karamany taloha aza ny karamany. Afaka nivory tsara kosa izy tamin’io asany vaovao io sady afaka nanao mpisava lalana. Tsy maintsy najanony anefa ny asan’ny mpisava lalana, rehefa niteraka roa lahy izy sy Josefina vadiny.
Mbola kely ny zanak’i José dia efa nampianariny ny fahamarinana. Vao telo volana tao am-bohoka ilay zaza, dia efa namakian’i José an’ilay boky hoe Ny Bokiko Misy Fitantarana avy ao Amin’ny Baiboly. Nino mantsy izy fa ho ren’ilay zaza izany. Vitan’i José ilay boky manontolo rehefa teraka i Noé. Hoatr’izany koa no nataony tamin’i Neftalí, ilay zanany faralahy.
Lasa lehiben’ny orinasa iray i José tatỳ aoriana, ary avo folo heny noho ny karamany teo aloha ny karamany. Niala tamin’io toerany io indray anefa izy tamin’ny 2008, rehefa 10 sy 13 taona ny zanany. Niverina nanao mpisava lalana izy, saingy tsy izy irery intsony fa izy efa-mianaka mihitsy. Tsy maintsy niezaka nitsitsy vola izy mianakavy, satria efa nihena be ny vola niditra. Mitarika fampianarana Baiboly 30 eo ho eo isam-bolana izao izy efa-mianaka. Nanome toky antsika i Jesosy hoe hitahy antsika i Jehovah, raha ataontsika loha laharana ilay Fanjakana. (Mat. 6:33) Natoky an’izany i José sy ny ankohonany, ary hitany hoe mitana ny teniny tokoa i Jehovah.